Yosua 2 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Afei Nun ba Yosua somaa mmarima baanu kodɛɛ fii Sitim,+ na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔhwɛ sɛnea asase no ne Yeriko kurow no te.” Enti wosiim kɔe, na wokoduu ɔbea aguaman bi a ne din de Rahab+ fie, na wɔsoɛɛ hɔ. 2 Afei asɛm no duu Yeriko hene asom sɛ: “Hwɛ! Israelfo mmarima bi aba ha anadwo yi rebɛhwɛ sɛnea yɛn asase yi te.” 3 Ɛnna Yeriko hene soma kɔɔ Rahab nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yi mmarima a wɔaba wo nkyɛn wɔ wo fie no bra, na wɔaba ha sɛ wɔrebɛhwɛ sɛnea yɛn asase no afã nyinaa te.”+ 4 Saa bere yi na ɔbea no de mmarima baanu no asie. Na ɔkae sɛ: “Ampa, mmarima no baa me nkyɛn, nanso minnim baabi a wofi. 5 Na esum durui a wɔrebɛto pon mu+ no, mmarima no fii adi, nanso minnim baabi a wɔfae. Monyɛ ntɛm ntiw wɔn na mobɛto wɔn.” 6 (Nso na ɔde wɔn kɔ ɔdan no atifi+ de wɔn akosie asaawa nnua bi a wɔahyehyɛ wɔ atifi hɔ mu.) 7 Enti ɔhene nkurɔfo no de wɔn ani kyerɛɛ Yordan asutwaree+ tiw wɔn. Bere a wofii adi ara pɛ na wɔtoo kurow no pon mu. 8 Ansa na mmarima a wɔwɔ ɔdan no atifi bɛda no, ɔbea no kɔɔ wɔn nkyɛn. 9 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Minim sɛ ɔkwan biara so Yehowa de asase yi bɛma mo,+ na mo ho hu mpo atɔ yɛn so+ dedaw. Na moama asase yi sofo nyinaa koma abotow.+ 10 Yɛate sɛnea mufi Egypt reba no Yehowa maa Po Kɔkɔɔ no yowee wɔ mo anim,+ ne nea mode yɛɛ Amorifo ahene baanu, Sihon+ ne Og,+ a wɔwɔ Yordan agya no, sɛe a mosɛee wɔn no.+ 11 Bere a yɛtee no, yɛn koma tui,+ na mo nti obiara honhom aguan besi nnɛ,+ efisɛ Yehowa mo Nyankopɔn yɛ ɔsoro a ɛwɔ soro ne asase a ɛwɔ fam yi Nyankopɔn.+ 12 Esiane sɛ mayɛ mo adɔe nti, monka ntam Yehowa din mu+ sɛ mo nso mobɛyɛ me papa fiefo adɔe.+ Enti momma me sɛnkyerɛnne+ a ɛyɛ nokware. 13 Mesrɛ mo munnye me papa+ ne me maame ne me nuanom mmarima ne mmea ne wɔn fiefo nyinaa. Na munyi yɛn kra mfi owu mu.”+ 14 Ɛnna mmarima no ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ́ mubewu de, anka yɛde yɛn kra betwa so!+ Na sɛ moammɔ asɛm yi so na Yehowa de asase yi ma yɛn a, yɛn nso yɛbɛyɛ mo adɔe na yɛadi mo nokware.”+ 15 Afei ɔmaa wɔn hama ma wɔde faa mfɛnsere mu sii fam, efisɛ na ɔbea no dan si kurow no fasu so, na ɔfasu so na na ɔte.+ 16 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ bepɔw so na wɔn a wɔrehwehwɛ mo no anhu mo; afei momfa mo ho nsie nnansa nkosi sɛ wɔn a wɔrehwehwɛ mo no bɛsan aba ansa na moakɔ mo kwan.” 17 Na mmarima no nso ka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛrenni fɔ wɔ ntam a woama yɛaka yi ho.+ 18 Hwɛ! Yɛreba asase yi so. Enti fa hama kɔkɔɔ yi sɛn mfɛnsere a woma yɛfaa mu yi ho, na ma wo papa ne wo maame ne wo nuanom ne wo papa fiefo nyinaa mmɛka wo ho wɔ fie ha.+ 19 Na obiara a obefi fie yi mu akɔ abɔnten no,+ ne mogya begu ne ti so, na yɛrenni fɔ. Na obiara a ɔwɔ wo nkyɛn wɔ fie ha de, sɛ obi de ne nsa ka no a, ne mogya bɛba yɛn ti so. 20 Na sɛ wobɔ asɛm yi so+ a, ɛnde yɛrenni fɔ wɔ ntam a woama yɛaka yi ho.” 21 Ɛnna ɔbea no kae sɛ: “Nea moaka yi mmra mu saa.” Afei ogyaa wɔn ma wɔkɔe. Na ɔde hama kɔkɔɔ no sɛn mfɛnsere no ho. 22 Enti wɔkɔɔ bepɔw so na wɔtenaa hɔ nnansa kosii sɛ wɔn a wɔrehwehwɛ wɔn no san bae. Na wɔhwehwɛɛ akwan no nyinaa so nanso wɔanhu wɔn. 23 Afei mmarima baanu no sian fii bepɔw no so, na wotwaa nsu no baa Nun ba Yosua nkyɛn, na wɔbɛkaa nea wɔfaa mu nyinaa kyerɛɛ no. 24 Na wɔka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Yehowa de asase no nyinaa ahyɛ yɛn nsa.+ Na yɛn nti, asase no sofo nyinaa koma abotow.”+